Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Europe bụ ihe magburu onwe nzukọ ebe nke ọtụtụ dị iche iche omenala - na culinary omenala. Mba ọ bụla nwere ya dị iche iche amata, nke na-adọta ndị ọbịa nri n'ime ya akụkọ ihe mere eme na ihe nile ọ na-enye. Na ná mba ụfọdụ,, na pụtakwara flavorful ọṅụṅụ! Those of…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Njem onye isi Europe na February nwere ike inweta ụfọdụ n'ime ihe ndị Afrika kacha mma nlegharị anya ìgwè mmadụ-free, tinyere isi na-adọrọ mmasị dị ka ndị Spanish Nzọụkwụ na Tivoli Gardens. February bụ ihe nke a breather: a ụtọ ntụpọ n'etiti ọrụ n'aka ezumike oge na obi anụrị. Ọ bụrụ na…
Gịnị Bụ The Top 8 Pizzas Na Italy
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji Nke ebe mma na-enwe Pizza karịa mba nke na mepụtara ya, nri? Ịtali ịhụnanya, n'anya, a n'anya na-atọ ụtọ nri-tụgharịa-nri! Sịkwa pizzas na Italy na-ghọọ a dị ọcha ụdị art, na-emesị UNESCO nwapụtara! Agagharị gburugburu Italy, you’ll find pizzerias opened in…